‘गाई गुरु’ खाँडले डुम्रेमा यसरी फलाए सुन ! – Everest Dainik – News from Nepal
‘गाई गुरु’ खाँडले डुम्रेमा यसरी फलाए सुन !
पाल्पा, चैत २२ ।
पाल्पा डुम्रेका दुर्गा बहादुर खाँडलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई छ । जिल्ला भित्रैपनि उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार थाप्नेदेखि विभिन्न ठाउँमा गर्ने सम्मान लिन उनलाई समय नै छैन । उनी यति सफल छन कि आर्थिक र सामाजिक दुवै रुपले उनी सम्पन्न मात्रै छैनन्, सफल पनि छन् । त्यही सफलताका कारण उनी व्यस्त छन् एकातिर गाउँघरका मानिसलाई तालिम र सल्लाह त दिनुनै छ अर्कातिर गाईको रखेदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि छ । गाउँमा उनलाई ‘गाई गुरु’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।
उनै ‘गाई गुरु’को जिन्दगीको प्रगतिको कथा भने रोचक छ । युवा अबस्थामा उनी पनि लाहुरे बन्ने सपना पालेर हान्निए भारत । काम राम्रै पाए तर, टिक्न सकेनन् र दुई वर्ष पछि फर्किए आफ्नै गाउँ ।
लेखक: सन्जु पौडेल
उनलाई भारत पुगेपछि लाग्यो नेपालमै केही गर्न सकिन्छ । गाउँ फर्किएको केही महिनापछि सुरु गरे नयाँ खालको बाख्रा पालन व्यवसाय ।
यसैक्रममा उनले गा.वि.स. मार्फत ३५ दिने ग्रामिण पशु कार्यकर्ता तालिम लिने मौका पाए । जुन तालिमले उनको जीवनमा नयाँ मोड ल्याइदियो । अब उनी बाख्रा पालन व्यवसाय होइन गाई फार्म खोल्ने मुडमा पुगे ।
उनले तालिमबाट बाख्रा पालन ब्यवसाय गर्दा गरेका गल्ती हरुका बारेमा जानकारी पाएका थिए । पशुहरुलाई खुवाइने खोले दानापानी र त्यसलाई लाग्ने रोगव्याधि बारेमा उनले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाए त्यसपछि उनी मोडिए गाइ फार्म खोल्न ।
त्यसको अर्काे कारण थियो दानापानी ।
डुम्रेको भौगोलिक वातावरण अनुसार त्यहाँ डाले घासँको राम्रो उब्जनी हुने खालको थियो । डाले घाँसले बाख्रा पालन भन्दा गाई पालन ब्यवसायबाट धेरै प्रगति गर्न सक्ने उनले जानकारी पाएपछि गाईपालन तर्फ उनी आकर्षित भएका थिए ।
तर, उनी आकर्षित भएको गाईपालन व्यवसाय ने उनको गाउँको लागि नयाँ थियो । कसैले पनि डुम्रेमा गाई पालन गरेका थिएनन् । खाँडले साहस जुटाएर सुरु गरे । सुरु सुरुमा धेरैले उनको कामलाई असहयोग मात्रै गरे । तर उनी आत्तिएनन्, गाउँका मानिसको असहयोगबीचमा पनि उनी आफ्नो काममा लागिरहे ।
अहिले तिनै मानिस उनीसँग सल्लाह लिन आउछन् ।
खाँड गाईलाई कुनै समस्या पर्ने बित्तिकै पशु स्वास्थ्यमा पुगिहाल्थे । भेटेनरी डाक्टरको सल्लाह अनुसार उपचार गर्थे जसकारण उनले गाई पालन ब्यवसायमा दिन दिनै प्रगति गर्न थाले ।
२ ओटा गाईबाट शुरु गरिएको उनको फार्ममा अहिले ३५ ओटा गाईहरु छन् ।
बाख्रा र बंगुर पालन ब्यवसाय मात्र गरिने त्यस क्षेत्रमा उनले गाई व्यवसाय गरेर सबैको मनमात्रै जितेनन् । आर्थिक रुपमा पनि बलियो बने ।
त्यसपछि गाउँका धेरैको मन परिवर्तन गराए । त्यसपछि आफैँ रहेर छापो विकास समिति स्थापना गराए र गाउँका सबैले एउटा गाई अनिवार्य पाल्नैपर्ने नियम बनाए ।
खाँड आफैँ गाउँमा उत्पादन भएका दुध संकलन गर्छन । गाउँका सबैले अहिले पाँचवटा भन्दा बढी गाई पालन गरेका छन् ।
उनको एउटा योजना छ, गाउँका सबैलाई उद्यम बनाउने । अहिले उनी त्यही योजनामा लागेका छन् । त्यसको सुरुवात उक्त गाउँका सबैको घरमा व्यवसायिक गाई पालन गर्न लगाएर गरेका छन् ।
गाउँका किसानका लागि बैङकले ऋण दिने व्यवस्था थिएन । बैङकले किसानहरुलाई विश्वास गर्दैनन् । तर, अहिले खाँडले सञ्चालन गरेको व्यवसायले बैङ्कपनि ऋण दिन तयार भयो । त्यो पनि विना धरौटि । अहिले बैङ्कले उक्त ऋणको संख्या बढाएर २० लाख पुर्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानु भन्दा स्थानीय स्तरमै केही गर्नु पर्दछ भन्ने सोँच राखेका खाँडको गाई व्यवसाय हेर्न तथा ब्यवसायको बारेमा जानकारी लिनका लागि स्थानीय देखि अन्य जिल्लाका कृषकहरु उनको गोठ सम्म पुग्ने गर्छन् । अहिले सम्म उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा २ हजार भन्दा बढीलाई व्यवसायिक गाई पालन व्यवसायको बारेमा जानकारी दिइ सकेका छन् ।
दुर्गाको आफ्नो ब्यवसाय मार्फत दैनिक १२० लिटर सम्म दुध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसैगरि त्यँस क्षेत्रका ब्यक्तिगत तथा समिती मार्फत करिब १८०० लिटर सम्म दुध उत्पादन हुने गर्दछ । यसरी उत्पादन भएको दुध पाल्पा बजारमै खपत हुँदै आएको छ । दुर्गाले यसरी उत्पादन हुने दुधको मात्रा बढाएर दुध र दुध जन्य परिकारहको पनि विक्री वितरण गर्ने योजना बनाएका छन् ।
व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी भन्दा पनि असल र सफल योजना आवश्यक हुन्छ भन्ने दुर्गा व्यवसायलाई अगाडी बढाउन ऋण लिन डराउनु हुदैंन भन्छन् । कृषकहरुले आफूलाई गोठालो भनेर कमजोर सोच्नुहुदैन, व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडी बढ्दा अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ट्याग्स: durga bahadur khand, palpa